စမတ်ဖုန်း Xiaomi က CC9: အသစ်တစ်ခုကိုလိုင်းများ၏ကြေငြာချက် | TeraNews.net
စမတ်ဖုန်း Xiaomi က CC9: သစ်ကိုလိုင်းများ၏ကြေငြာချက်
စာရေးသူ TeraNews Published 02.07.2019
တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးက high-quality နဲ့တန်ဖိုးနည်းမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အနေအထားခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ နှင့်ယခုအသစ်ကမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုသှားဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ စမတ်ဖုန်း Xiaomi က CC9, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲအသုံးပြုသူစိတ်နှလုံးကိုအောငျနိုငျဖို့အဆင်သင့် Device ရဲ့မြေတပြင်လုံးအကွာအဝေး။
CC9, SS9e နှင့် SS9 Meitu Edition ကို: အသစ်လိုင်းမော်ဒယ်များတရုတ်ထုတ်လုပ်သူများပါဝင်သည်။ အားလုံး devices များသည် Mi9အပေါ်အခြေခံထားတယ်, ဒါမှမဟုတ်အစား, ကလုံးဝစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်၏ဗားရှင်းပြင်ဆင်ထား၏။ တဦးတည်းခြားနားချက်အတူ - အစားအစွမ်းထက် Processor ကို Qualcomm Snapdragon 855 ၏, ထိုအသစ်အဆန်း Snapdragon 710 လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
စမတ်ဖုန်း Xiaomi က CC9: ဂုဏ်သိက္ခာ
တရုတ် - လူအကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Siaomi တို့တွင်ဖောက်သည်ဆုံးရှုံးဖို့ကယ်တင်နှင့်မဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ တစ်လက်ဗွေစာဖတ်သူကိုအားဖြင့်ထိုအတူ CC9 Mi9 AMOLED မျက်နှာပြင် 6,39 လက်မ FullHD + မျက်နှာပြင်မှာ။ Screen Brightness ကို 600 cd / မီတာ2.
အသုံးပြုသူများရဲ့အရည်အသွေး selfie လိုအပ် - ပြဿနာများမရှိဘဲ။ F / 586 မြှေးနဲ့ resolution ကို 48-megapixel ရှေ့ကင်မရာနှင့် 32 အမတ်ဖို့ Sony က IMX1,6 အဓိကကင်မရာက။ NFC ကို adapter, အနီအောက်ရောင်ခြည် itzluchatel အသံက Hi-res HD ကို - ခေတ်သစ်စမတ်ဖုန်း၏စံသတ်မှတ်ချက်။
ဒါပေမယ့်စမတ်ဖုန်း Xiaomi က CC9 ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အတူပင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Mi9ရှောင်ကွင်း။ ထုတ်လုပ်သူ 4030 mAh ဘက်ထရီများ၏ဘက်ထရီစွမ်းရည်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။ ထို "အားနည်း" Processor ကို Snapdragon 710 ဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုတည်းတာဝန်ခံအပေါ်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ Xiaomi ကစမတ်ဖုန်းသုံးအရောင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းသတိပြုပါ။ "ဆီးနှင်းပေါ်နေ Sparks" - ထိုကဲ့သို့သော, အဖြူရောင်ဂန္အနက်ရောင်အပြောင်းအလဲ၌၎င်း, လက်မှတ်လိမ်နဲ့အပြာကိုယျခန်ဓာအဖြစ်။ CEO ဖြစ်သူလဲ့ Zong စမတ်ဖုန်းများအတွက်စျေးနှုန်းများကြေညာခဲ့သည်။ နိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဗားရှင်း6/ 64 - 260 ဒေါ်လာ။ RAM နဲ့ flash ကို၏6128 GB ကိုအတူတစ်ဦးကစမတ်ဖုန်း - $ 290 ။ စျေးနှုန်းများတရုတ်စျေးကွက်အတွက်ဖြစ်ကြသည်။ ချက်ချင်းသင်သည်တတ်နိုင်ဖုန်းဝယ်ပါ.
ကြော်ငြာမပါဘဲ Youtube ကိုကြည့်ရှုနည်း - ပီစီ၊ စမတ်ဖုန်း
LG Stylo6စမတ်ဖုန်းတွင်ကြီးမားသော display နှင့် handwriting ပါဝင်သည်
Xiaomi ကထွက်လာတဲ့ MIUI 12 iOS အတွက်
VONTAR ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ် - ခေါက်သိမ်း၊ Bluetooth
Xiaomi Mi Pocket Photo Printer - ဒေါ်လာ ၆၀ ကျသင့်မယ့်ပစ္စည်း
07.12.2018 20 212
08.01.2020 13 513
22.07.2019 11 975